ASELSAN's Intelligent Ammunition Inoshanda Pasi peMotokari | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraASELSAN's Intelligent Ammunition Inoshanda paMunda Wemotokari
21 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, Kara, musoro wenyaya, KUZVIDZIVIRIRA, TURKEY
smart ammunition zvidzidzo pamotokari dzepasi
Kudzivirirwa kweTurk, inova mumwe wevatsigiri veTurkey ASELSAN masangano anodzivirira indasitiri; anotakura akangwara mfuti dzematangi nemotokari dzehondo.
Yakagadziridzwa neASELSAN nerutsigiro rweTİBİTAK SAGE uye MKE, KORKUT neFire Management Management (AIC) uye 35mm Particle Ammunition, chikuru chinangwa chakamiswa icho chiri mweya-kune-pasi makomba; Iyo yakagadziridzwa kune ino nharaunda nekuongorora kuti mota dzakabatwa dzinowedzera kuwedzera kunoshamisa. MuKORHAN 35mm Weapon System, iyo iri kuvandudzwa neASELSAN, vachishandisa iyi nhetembo vachapa hurongwa hwekushandisa chombo chakakosha. Mafuta emubvunzo uyu akagadziridzwa kuti ape zvakanakisa kuzviisa pakachechewa, mota dzakajeka dzakabatwa uye ma sensors akaoma ari pamotokari dzinorema.
kuvhundutsa mweya yekudzivirira system aselsan
Huwandu pamwe nehuwandu hwezviumbwa mumamoni zvakagadziridzwa kuwedzera huwandu hwehuputi pane chakanangwa, uye huwandu hunobudirira hwemitambo kune chinangwa chakawedzerwa hwawedzera. Mafuta aya anogona kuraswa asina kudzivirirwa pese panodiwa uye anogona kupa hukuru hwekupinda mukati mekutarisana nemotokari dzine zvombo, zvivakwa nemabhuru.
Izvi zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoshandisa iyo yakafanana hardware uye software seye 35 mm Particle Ammunition yekudzora moto. Nenzira iyi, zvaive zvichibvira kushandisa ammunition aya muKORKUT uye AIC + MÇT masisitimu, pamwe nekushandiswa kwe 35mm Particle Ammunition yakagadzirirwa zvinangwa zvekudzivirira kwemhepo mumasisitimu akadai seKORHAN.
aselsan atomu mm
40mm Yakakwira Yekumhanya Smart Grenade Launcher Ammunition
ASELSAN yakagadzira 35mm High Speed ​​Smart Grenade Launcher Ammunition ichishandisa ruzivo rwayo mukugadzira 40mm Particle Ammunition. Mafuta ari mumubvunzo ane kugona kwekukakamira mumhepo kana yakarongedzwa pakubuda kwebhomba uye inogona kushandiswa zvinobudirira kupokana nem mini UAVs kana ikabatanidzwa mune zvese zvinangwa zviri shure kwedha uye muiyo ye IHTAR system. Mafuta anogona kukandwa kubva kuMP19 pfuti yakaiswa mumashure ekurayira zvombo masystem anogona kushandiswa seanopikisa vashandi vashandi mumamotoni ane SARP system yakaiswa.
mm programmable mk kushanda nheyo
120mm Akangwara Tank Amoni
Basa rinoitwa neASELSAN mumunda we smart ammunition ne kati caliber intensity rakawedzerwa uye smart ammunition zvidzidzo zvakatangwa kuitira tangi uye Howitzer ammunition. Muchirevo chechinyorwa chino, pane zvakare zvidzidzo zvekupa chikonzero che120mmmm HE mhando tank matangi. Yakagadziridzwa nekubatanidza smart plug muiyo yekirasi 120mm HE ammunition, iyo 120 mm Smart Tank Ammunition (120 mm ATM) ichave ine nguva yemagetsi inogadziriswa uye yemagetsi maitiro.
Iine iyo 120mm ATM, inovavarira kuwedzera kutyisidzira / kudzivirirwa zvisina kuvanzika zvakavanzika munzvimbo ye-anti-tank nzvimbo / kumirira muhara nekupa mari. 120mm ATM ichava mhinduro inoshanda yekuparadza masisitimendi akaomarara (semuenzaniso mapenisheni) pamotokari dzinogadzirwa muzvinhu zvevavengi, uye ichave nechokwadi chekuti zvinhu izvi hazvigone kubatira pamwe nekukwira kwepamusoro kubva kure kure.
Yakaputirwa plug ye155mm caliber ammunition
Zvinhu zvevashandisi zvinokumbirwa zvakanyanya nemushandisi maererano nekushanda kwehunyanzvi nekugadzirisa nzira yekubhururuka kweyemagetsi miseti. Mabasa aAsELSAN eizvi atanga nekugadzira plug yakarodzwa, inosanganisira akawanda-chinangwa plug maitiro anozoshanda aine 155mm caliber ammunition, uye ine chinangwa chekuwedzera chidzidzo icho chakasiyana calibha.
Kwayaka: System engine Directorate - Mukuru Nyanzvi Injiniya Gökmen Cengiz | Smart Ammunition Zvikumbiro muTangi uye Magetsi eArmobile - Aselsan Magazine Chinyorwa 105
Smart City Chiratidzo kubva ku Smart City
Zvimotokari Zvombo uye Mashomoni Akaiswa Train 10 Mazuva Kurindira paBilecik Station (Video)
Kubvumirwa kweAselSan's Railway Welding Design Works neTürk Loydu
Inyanzvi Inyanzvi Inoshanda MuSakarya Inoenderera mberi Nokukurumidza Zvizere
Inyanzvi dzeMigwagwa yeMagetsi Kuiswa Kwemabasa Kwakatanga muSakarya
Gungano Rinoshanda KwemaBicycle Bicycle Rakatanga muSakarya
Bursa Smart Guta Projekiti Inoshanda Zvibereko
Uchenjeri hunowanikwa huripo hwekutenderera hutsika hutsika
Hondo dzehondo dzakaputika muchiteshi chezvitima cheDuuzuz muOrenburg, Russia
Mhomho dzakabudiswa kubva kuchero reMarmaray
Chiratidzo cheTender: Kuongorora Zvombo uye Kuchenesa
Smart Tank Amoni
Chiro Chekushandisa Moto
HE mhando tank matangi
Yekumusoro Smart Smart Grenade Launcher Ammunition
IETT Inotumira Zvinhu Zvakakanganwa Mumotokari Yevatakuri Vekutakura
Chivakwa uye Karşıyaka Kuvakwa kwematanho etamu uye mota dzichashanda pane idzi miviri mitsara ve
Hutsanana Dzidziso muRuzhinji Zvokufambisa Motokari muElazig
Nurettin Atamtürk: ELECTRONIC RECORDER FOR RAILWAY VEHICLES = NYAYA BOX (CPM)
Shevedzai maIzmirians ari Munjodzi Mapoka: 'Usashandise Veruzhinji Kutakura'